INokia 3.1 Plus: Iimpawu, iiNkcukacha kunye neXabiso | I-Androidsis
INokia 3.1 Plus ifikile: dibana nento entsha evela kwinkampani yaseFinland
INokia 3.1 Plus ngoku isemthethweni. Le fowuni iza njenge-smartphone enexabiso elihle lemali njengezinye iimodeli kuthotho lwayo.
Isixhobo siza nescreen esikhudlwana kunye noyilo olusebenzayo.remums, nangona ngaphandle konwabile Inotshi. Ngaphakathi kufihla amandla amakhulu kubasebenzisi abanemfuno ephezulu kunye nezinye iinkcukacha esiza kukutyhilela zona ngezantsi.
INokia 3.1 Plus ixhobisa isikrini esine-6.0-intshi ye-diagonal HD +. Oku kugcina isisombululo see-pixels eziyi-1.440 x 720, nesishwankathelwe ngokucacileyo kwifomathi ye-18: 9 yokubonisa. Kwakhona, njengoko sele sibonile, ayinayo inotshi, ke iyaphambuka kwindlela yangoku.
Ngokumalunga nolunye ulwazi, isixhobo esitsha sefinland sinefayile ye- I-Mediatek Helio P22 iprosesa engundoqo esibhozo, I-SoC ekwaziyo ukufikelela kumaza aphezulu e-2.0 GHz enkosi kwii-Cortex-A53 zayo ezisibhozo. Kwangelo xesha, i-terminal ine-RAM ye-2 okanye ye-3 GB, indawo yokugcina eyi-16 okanye i-32 GB kunye nebhetri ye-3.500 mAh, eya kuthi isinike ukuzimela okuhle.
0.1 Kwezinye iindaba: INokia 7.1 isemthethweni: bonisa nge-notch, SD636 kunye nokunye
1 Ixabiso kunye nokufumaneka
Kwezinye iindaba: INokia 7.1 isemthethweni: bonisa ngenotshi, i-SD636 kunye nokunye
Ngakolunye uhlangothi, inekhamera emibini yangasemva yesisombululo se-13 kunye nesi-5 se-MP ngokuvula f / 2.0 kunye f / 2.4, ngokulandelelana. Iyonke, inzwa yefoto ye-8 MP ene-f / 2.2 yokuvula ihleli ngaphambili kwii-selfies kunye nevidiyo. Inomfundi ongasemva wokuprintwa kweminwe, i-headphone jack, izibuko le-microUSB, i-LTE Cat. 4 uqhagamshelo, L + L, VoLTE, VoWiFi, iBluetooth 4.1 kunye ne-WiFi 802.11 b / g / n
INokia 3.1 Plus ibhengezwe eIndiya ngexabiso le- Inguqulelo ene-11.499 ​​GB ye-RAM kunye ne-135 GB yememori yangaphakathi. Ngokumalunga nolunye umahluko, akukho lwazi kwiindleko zalo. Iya kufika ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ngwevu emnyama nomhlophe.
Malunga nokufumaneka kwelizwe, akukho lwazi luthile malunga nokuba luya kufumaneka nini, Nokuba iya kuwela umda usinge eYurophu nakwihlabathi. Le yinto sele iza kubhengezwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 3.1 Plus ifikile: dibana nento entsha evela kwinkampani yaseFinland
Ungayiguqula njani i-Android yakho ibe yiPixel 3
Ngena kwi-Zombie Rollerz pinball RPG